Madaxweynaha la doortey ee Belaruus oo farta ku fiiqay dalalka qasaya dalkiisa - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Madaxweynaha dalkaasi ka tirsanaan jirey midowgii Soofeeti ee Belaruus ee shalay dib lo doortey ayaa rabshadaha dalkiisa ku eedeyay inay ka dambeeyaan reer galbeedka. Wuxuu farta si toosa ugu fiiqay Ingiriiska, Boolan iyo Jamhuuriyada Jeek.
”Waxaan shaki ku jirin in rabshadaha dalka ka socda ay ka dambeeyaan Ingiriiska, Boolan iyo Jamhuuriyada Jeek ayuu yiri Lukasheenko oo talada dalkaasi hayay burburka midowga Soofeeti.
”Waxaan dhexda ka qabanay xiriiro ka dhexeeya dadka rabshadaha wada iyo ajaanibta Ingiriiska iyo dalalka kale ku jiraan ayuu raaciyay Lukasheenko oo ka tirsanaan jiray sirdoonkii laga baqi jirey ee dalkii weynaa ee midowga Soofiyeeti.
”Ogolaan mayno afgambi laga soo abaabuley dibedda, waxaan leehay waalidiinta qabsada caruurtiina maskaxda laga qabsaday ee mooday jano inay taalo hantigoosadka iyo khaniisaynta aduunka ee rer galbeedka ayuu yiri Lukasheenko